BC "Vysotsky", Ekaterinburg, observation emphemeni. "Vysotsky" isikhathi ukusebenza kanye nekheli
Skyscraper "Vysotsky" isikhathi eside kwaba Isakhiwo esiphakeme kunazo zonke e eYekaterinburg. Okusanda, lwaphuka irekhodi. Kodwa ngisho ukuthatha indawo yesibili kwenani iphansi, umbhoshongo iyamangalisa. Yini uncoma kakhulu ngesikhathi uqimba engenhla ine emphemeni observation. "Vysotsky" umema wonke umuntu ukuba sibheke Ekaterinburg kweso lenyoni umbono!
The esiphezulu phezulu enyakatho
Ukwakhiwa kombhoshongo waqala ngo-2006. Igama layo okuqala eNhlangano skyscraper wathola ngokushesha ngaphambi kokuthuma. Ngesikhathi kwakhiwa wabizwa ngokuthi "Antey-3" injengombhoshongo kwakungekaNkulunkulu esigabeni wesithathu "Antey" eziyinkimbinkimbi. Umqondo we-phezulu ngokuthi ngemva umlingisi odumile kweSoviet futhi umculi efana inzalo yakhe. Ngezinye kuvulwa mbhoshongo wabizwa mathupha indodana Vladimir Vysotsky.
Ngaphakathi isikhungo yebhizinisi emnyuziyamu elalinikezelwe ukuphila futhi imisebenzi Bard. Ngisho esigabeni design, kwaba sobala ukuthi lesi sakhiwo kumele kube eziphakeme platform observation. "Vysotsky" isikhathi eside kwaba phezulu kwezihlahla ezinde kunazo zonke kuleli dolobha. Futhi muva nje kuphela eYekaterinburg umbhoshongo "Iset" yayakhiwe, edlulele ukuphakama kwalo amamitha angu-20.
Meyi 4, 2012 waqala yayo platform umsebenzi phezulu observation. Emcimbini wokuvula ubuhanjelwe yizikhulu abaningi ababevelele Sverdlovsk esifundeni, ikakhulukazi inhloko kwabaphathi bedolobha Aleksandr Yakob. phansi 52nd, noma 186 amamitha - ukuphakama lapho kukhona emphemeni observation. "Vysotsky" futhi ngaphambi kuvulwa Luhambo uye yabakhanga izakhamuzi nezivakashi. Uma yesikhulumi lwenziwe litholakale emphakathini, emigqeni amathikithi abangu ngakho enwetshiwe ukuthi kwanqunywa ukwethula ukuvakasha ngesivumelwano.
Ngenkathi kwakhiwa isikhungo ibhizinisi igxile ngokugcinwa izindinganiso zokuphepha. Umklamo eziphambili kakhulu izixazululo, inani Amazing yentuthu futhi qikelela ukuthi zonke izinto kancane - konke ugxile Skyscraper "Vysotsky" (Ekaterinburg). Emphemeni observation futhi ezibalulwa kanjena ngokufanele nge ethokomele nephephile izivakashi. Yazisa ama-panorama ubude can eYekaterinburg ngaphansi esibhakabhakeni evulekile. Along azungezwe ebaleni lokudlala sibahlanu, sizungezwe uthango okusezingeni eliphezulu ezenziwe ngengilazi eqinile okusobala. Ukuze uthole imali eyengeziwe, ungakwazi ihlanganise e idokodo yangasese ebiyelwe noma ukuba abone umuzi ngokusebenzisa izibonakude.
Amaqiniso kanye Izinombolo
Le ndawo Imininingwane yesikhulumi eyakusho 651 m 2. Izivakashi bathenjiswa umbono ovusa amadlingozi edolobheni, ibanga wokubuka amakhilomitha okungenani 25. Kuyaphawuleka ukuthi ngo-evumayo kakhulu endaweni eyakhelwe BC "Vysotsky". Skyscraper observation emphemeni ikuvumela ukuba ubone zonke izindawo edolobheni, nedlelo kanti ezinye emadolobheni angomakhelwane.
Izivakashi eziningi ezifana ilungiselelo nezinezimo ngoba ezihambela ophahleni lwendlu elilodwa yezinto ezithakazelisa kakhulu we skyline edolobheni. Emphemeni observation has a kombhede, futhi ikhava esobala kudala inkohliso wokuba ngaphandle. Kuyini nice ikakhulukazi - abhekene necala design idaliwe kusuka ingilazi nombono wanamuhla undistorted ngisho nalapho ngokudubula.
Uyithola kanjani i-uhambo?
BC "Vysotsky" (Ekaterinburg) has ekhelini elilandelayo: ul. Malysheva, indlu 51 namuhla ukuze uthole labagibeli observation kungaba ubani ohlala noma isivakashi komuzi. Bhalisela i-uhambo kusengaphambili ayidingekile. Amaqembu akhiwa endaweni lapho siqashe inani elidingekayo izivakashi. Uma uya ukuze ngifike eYekaterinburg ngisuka edolobheni futhi hambo isikhathi esilinganiselwe, kunengqondo ukubhalisa kusengaphambili. Ungavakashela isayithi ebusuku ngesivumelwano.
Ummango beya esizoqala kuso ukubala ukuvakasha wenziwa a ngesivinini ikheshi ekhethekile. Ngesikhathi ukungena esakhiweni zonke izivakashi uthola iqoqo "Umhlahlandlela audio". Lokhu earphone kanye Lidlulisela ekhethekile, ngawo ungakwazi ukulalela inkulumo mayelana uhambo umlando Ekaterinburg. Kunzima phikisana yokuthi yezindawo romantic kakhulu emzini - eziphakeme platform observation. "Vysotsky" linikeza izakhamuzi nezivakashi Ekaterinburg ukuhlela usuku abangasoze balukhohlwa. On emphemeni observation kukhona amadokodo yangasese lapho ungakwazi umhlalaphansi aphuze champagne bejabulela panorama komuzi Chic.
BC "Vysotsky": i emphemeni observation. Intengo Ticket futhi Isaphulelo
Phakathi nezinsuku, ngentengo ye-ithikithi omdala labagibeli eyakusho ruble 250-300 kuncike esikhathini ukuvakashelwa. Buka edolobheni kwaphezulu, unga ngenani aphansi ukuze 18,00. On ngamaholidi nangezimpelasonto, futhi ebusuku ungajabulela panorama ka eYekaterinburg ngoba ruble 500. A uhlelo nezimo izaphulelo kanye amalungelo. Ukufinyelela indawo can izingane ngaphansi kweminyaka engu-5 kanye neMpi Yezwe II Veterans. Invalids kwawo wonke amaqembu kanye izingane ezineminyaka engu-5 kuya kwengu-12 ubudala ungakwazi ukuthenga amathikithi ngentengo encishisiwe - I-ruble 150 kuphela. 20% isaphulelo kuyatholakala zesikole, abafundi kanye nabahola impesheni.
sipho abahlukile: noma ubani ukuqasha wonke platform wokubuka yemisebenzi yakho. Izindleko sevisi ruble 25,000 ngehora. Zonke incike isikhathi namahora. A ibhonasi nice: zonke izivakashi oye wathenga ithikithi labagibeli observation, ukujabulela ukufinyelela Museum Vladimira Vysotskogo, batholakala esitezi we phezulu yesibili.
Ukuthatha izithombe namavidyo ngesikhathi uhambo khulula. observation emphemeni izivakashi avunyelwe ukuba asondele kunkosikazi onogada, ukudweba noma lizama ukukhuphuka phezu kwabo. Phakathi nohambo akunakudluliswa ukubhema futhi nokuphuza utshwala. Abantu bedle utshwala noma izidakamizwa, kungenzeka inqatshelwe kuyanda labagibeli observation. Isikhathi ukuvakasha kuba imizuzu engaba ngu-60. Izivakashi avunyelwe ukuletha iziphuzo ezibandayo futhi Ungadla. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-15 ubudala ungeniswe emphemeni observation kuphela uma behamba abadala.
Amahora ukubukwa platform "Vysotsky" kuhluke izinsuku ezahlukene ngesonto. Kusukela ngeSonto kuya kuLwesihlanu, ukubheka emzini kusuka ukuphakama kungaba kusukela 10.00 kuya 22.00. amathikithi NgoLwesihlanu nangoMgqibelo zidayiswa ihora elilodwa isikhathi eside, futhi izinkambo zisesikhathini 23,00. Kubathandi izibani ebusuku lomuzi bamenyiwe ukuvakashelwa lokhu nokuzwa emangalisayo ebusuku. Oku-yokubhalisa ukuvakasha emva 23,00 liyadingeka!
Izinto okumele uzenze ku ophahleni phezulu? Yazisa ukubukwa esiyingqayizivele, ukuthathwa isithombe noma ukuhlela a professional photo session. Ngokuvamile lo mbhangqwana akhethiwe ukubukwa platform. Lapha ungakwazi ukuchitha usuku romantic futhi wenze isicelo angeke abamele noma iyiphi intombazane.
Izimpendulo ezivela kulabo wabheka Ekaterinburg kweso lenyoni umbono
Omunye izimpawu yesiteleka kakhulu futhi engavamile yesimanje komuzi - Skyscraper "Vysotsky" (Ekaterinburg). Emphemeni okwashiwo umbhoshongo - lena indawo saziso ukuvakashela Leso naleso sakhamuzi futhi isivakashi kwalesi sigodi. Ngisho noma njalo babehlala eYekaterinburg, umuzwa omusha wokubona edolobheni lakubo kusuka engela engavamile yibhange. Vakashela emphemeni eyakusho ezithakazelisayo ngokulinganayo ekuseni nakusihlwa. Khetha usuku lucacile, njengoba kufanele zibabaza ubuhle bengaphandle.
Sicela uqaphele ukuthi ku-site efakwe ukwaziswa amabhodi echaza izinhlobo ukuvulwa kanye ezikhangayo. Futhi okubaluleke: ungakhohlwa ikhamera yakho! Bright ezithakazelisayo izithombe inkumbulo lolu hambo engavamile ngeke kuhlobisa albhamu yakho. Kuyini nice ikakhulukazi - izindleko ukuya kuseshini ifaniswe izindleko ukushayela kunoma iyiphi ride zanamuhla kunepaki. Manje ngoba sewuyazi ukuthi ungafika kanjani emphemeni observation, "Vysotsky", ihlala yodwa ukukhetha usuku lokuthenga amathikithi. Sifisela wena ejabulisayo!
Lapho, ngo-September ukuphumula phesheya? Lapho kangcono uphumule kwezilwandle Septhemba
Kanjani ukusuka ePrague eMunich ngesitimela, ngebhasi noma ngemoto
Yini okufanele uzithathe kulesi sibhedlela naye kusuka izinto?
Hambayo embhedeni: kanjani ukuba ukhethe carousel imilingo?
Ukuhlobisa ifenisha - elula azwakale kamtoti
Ubuhlungu coccyx: izimbangela, ukwelashwa
Coagulation: kuyinsakavukela kanye nokusuka
Amandla Usizo waseZulwini: i-Psalter impilo
Iqhawe le-Olympic uBoris Shakhlin: i-biography, impumelelo yezemidlalo